COVID-19 နဲ့ ဗီတာမင် D ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ - Hello Sayarwon
COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရေးမှာ ဗီတာမင် D က ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍမျိုးကနေ ပါဝင်နေသလဲ? သွေးထဲက ဗီတာမင် D ပမာဏဟာ ကိုဗစ်ရောဂါဟန့်တားရေးမှာ အရေးပါနေသလား?
နိုင်ငံအသီးသီးမှာ မတူကွဲပြားစွာပြုလုပ်ထားတဲ့ အမျိုးမျိုးသော သုတေသနရလဒ်တွေက ညွှန်ပြနေကြတာကတော့ ကိုဗစ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ လူနာအများမှာ သွေးတွင်း ဗီတာမင် D ပမာဏ နည်းပါးနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ဗီတာမင် D ချို့တဲ့မှု ဝေဒနာခံစားရတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက လူနာတွေဟာ ဗီတာမင် D ပမာဏပိုများတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက လူနာတွေထက် သေဆုံးနှုန်းပိုများပါသေးတယ်တဲ့။ ဗြိတိန်မှာဆိုရင် ကိုဗစ်လူနာတွေရဲ့ ၁၇% ဟာ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေသူတွေပါ။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ သွေးတွင်း ဗီတာမင် D ပမာဏဟာ ကိုဗစ်ကို တိုက်ထုတ်ရာမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အကူအညီဖြစ်စေတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ်တွင်း ခုခံအားစနစ်က အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်တာ၊ မိမိခန္တာကိုယ်အတွင်းက ဆဲလ်တွေနဲ့ တစ်ရှူးတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်စေတဲ့ Cytokine Storm ဖြစ်ပေါ်တာတွေကို တားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ကနေဒါတို့မှာ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ သုတေသန ၈ ခုရဲ့ ရလဒ်တွေအရ ဗီတာမင် D ဟာ ကိုဗစ်ရောဂါတားဆီးရေးနဲ့ တိုက်ထုတ်ရေးမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ခိုင်မာစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင် D လို့ ဆိုလိုက်ရင် နေရောင်ခြည်ကနေရတယ်လို့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြပါတယ်။ မနက်ခင်းနေခြည် နွေးနွေးလေးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် D ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အရိုးနဲ့ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပြီး စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးပေါ့။
ဒီမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာတာက ကိုဗစ်တားဆီးရေးမှာ ဗီတာမင် D လိုအပ်တယ်ဆိုရင် နေရောင်ခြည်ခံယူရုံနဲ့ ကိုဗစ်ကို မတားဆီးနိုင်ဘူးလားဆိုတာပါပဲ။
မရဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုဗစ်ကို တိုက်ထုတ်ရာမှာ ဗီတာမင် D က အရေးပါတာမှန်ပေမယ့် နေရောင်ခြည်မှာပါဝင်နေတဲ့ တခြားအရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UVA ၊ UVB နဲ့ UVC) ကတော့ ဗီတာမင် D လို အကျိုးကျေးဇူးမျိုး ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နေရောင်ခြည်မှာ အများဆုံးပါဝင်နေတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UVA နဲ့ UVB တို့ဟာဆိုရင် အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်တာ၊ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာတွေ၊ အသားအရေထိခိုက်မှုတွေ၊ အရေပြားထဲကDNA ကို ထိခိုက်စေတာတွေ၊ နေလောင်တာတွေနဲ့ အရေပြားကင်ဆာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗီတာမင် D သီးသန့် အလိုရှိတယ်ဆိုရင် တခြားနည်းလမ်းကို အသုံးပြုဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D ဟာ နေရောင်ခြည်တစ်မျိုးတည်းကနေ ရရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာတွေကနေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အဆီဓာတ်ပါဝင်တဲ့ တူနာ၊ မာကရီယယ်၊ ဆာလ်မွန်စတဲ့ ငါးတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ လိမ္မော်ရည်၊ ပဲနို့၊ စီရီယယ်၊ အမဲသာ၊ ကလီစာ၊ ဒိန်ခဲနဲ့ ဥတွေကနေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် D ရဲ့ ဆိုတာ
ဗီတာမင် D ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D ဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ အရိုး၊ ကြွက်သားစတာတွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အာဟာရဓာတ်ဖြစ်တာမို့ ဒီအရာတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို ကုစားရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
မွေးရာပါ Phosphate ဓါတ်နည်းသောရောဂါ
ကိုယ်ခံအားစနစ် လွန်ကဲမှုကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားရောဂါ
ကင်ဆာရောဂါတစ်ချို့ကို ကုစားရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်ခုသတိထားရမှာက ဗီတာမင် D ဟာ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့လည်း ဗီတာမင် D လွန်ကဲမှုမဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D ပမာဏလွန်ကဲမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗီတာမင် D ဟာ ကိုဗစ်ကို တွန်းလှန်ရာမှာ အသုံးတည့်တယ်ဆိုပေမယ့် တခြားဘေးအန္တရာယ်တွေကိုလည်း သတိထားရမှာမို့ ဗီတာမင် D လွန်ကဲမှုမဖြစ်အောင် သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင် ဗီတာမင် D ဟာ ကိုရိုနာရောဂါကို သေချာပေါက် ပျောက်ကင်းစေမှာမဟုတ်သလို ရောဂါပိုးကူးစက်မလာအောင်လည်း အလုံးစုံကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဗီတာမင် D ပြည့်ဝနေတာဟာ ကိုဗစ်အပါအဝင် ကူးစက်ရောဂါတွေ အလွယ်တကူ မကူးစက်လာအောင်၊ ရှိနေရင်လည်း ပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်အောင်တော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ကူညီပေးနိုင်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရာမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင်နေတာ၊ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝစွာ မှီဝဲစားသောက်တာအပြင် ဗီတာမင် D ကိုလည်း ပြည့်ဝနေအောင် ဖြည့်တင်းထားတာဟာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်တာ၊ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မသွားတာ၊ လူစုလူဝေးရှောင်တာ၊ လက်ဆေးတာ၊ မဖြစ်မနေ အပြင်သွားရမယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းစည်းတပ်တာနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်တာတွေက COVID-19 ကို ကာကွယ်ရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံး နည်းလမ်းတွေပါပဲ။